Ikhaya > Izindaba > Izindaba zezimboni > Ifenisha yePlastiki isiphenduke amandla amasha embonini yefenisha
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwesidingo sokuvikelwa kwemvelo, inkathi "enokhuni lweplastiki" iyeza, ifenisha yepulasitiki enombala wesicelo onesibindi nemfashini yokwakha imfashini iya iba yimboni entsha yefenisha embonini. Eminyakeni yamuva nje, izinhlobo ezinkulu zepulasitiki ephezulu imikhiqizo yefenisha iyaqhubeka nokwethulwa, isu lemakethe yefenisha yepulasitiki kusuka ekusetshenzisweni kwesisindo esiphansi kancane kancane kuya ekuthuthukisweni kwemakethe yabathengi ephezulu.
Enye, ifenisha yepulasitiki indawo ekhanyayo ingako
Kulezi zinsuku, uhlobo lwefenisha yepulasitiki olusebenza emndenini alunakubalwa: Dine itafula, ikhabethe, ibhakede lelayisi, umkhumbi wokuqukethwe wesitolo, isitsha sokugezela, isicathulo sokulinda le fenisha yepulasitiki ibe nokusebenziseka hhayi nje kuphela, futhi iseyindlela yokuhlobisa lokulala.
Isibonelo, ideski lepulasitiki nombala wesitulo unemibala egqamile futhi ecebile, elula futhi elula, indawo ekhanyayo engazigoqa ngentando ivumela izingane ukuba zikuthande kakhulu.Futhi leli tafula lepulasitiki nesihlalo akulula ukulimaza izingane, impilo yezingane eningi yansuku zonke engeza ubumnandi obuningi.
Uma kuqhathaniswa nesikhiya sendabuko sokhuni, ilokhi yokugcina ipulasitiki inamaphethini amaningi wokuthungwa, futhi kulula kakhulu ukuvula noma ukuhambisa ilokhi yesitoreji, futhi ukuhlanganiswa kombala nokumodela kuhlelwe kakhulu. bheka ngokukhanya futhi okusebenzayo, ungabeka izindwangu zansuku zonke ukuze ukwazi ukufaka into encane ethandekayo hhayi kuphela, izindwangu ezibeka isikhathi eside zithathwa i-air bask ngokulula kakhulu.
Okwesibili, imakethe yefenisha yepulasitiki inethemba elihle
Eminyakeni yamuva, ifenisha yepulasitiki iveza ukwehlukahlukana, umehluko omuhle.Ngokuguqulwa komqondo wokusetshenziswa kanye nokuhlukaniswa kwesici nokuhlukahluka kwesidingo sefenisha, ifenisha yepulasitiki iyathandwa esizukulwaneni esisha. Eminyakeni yamuva nje, abaklami abaningi namabhizinisi efenisha sethule imikhiqizo yefenisha yepulasitiki enezinto ezicebile zeThe Times, futhi ifenisha yepulasitiki kancane kancane iba "ikhekhe elikhulu" elihlala imidondoshiya yefenisha.
Olandelayo:Izesekeli zefenisha yasehhovisi zidinga ukusebenzisa ini?